होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई डा. रवीन्द्र पाण्डेका १६ सल्लाह - Recent Nepal News
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख १८, २०७८ समय: ९:२३:५६
काठमाडौं । कोभिड १९ को संक्रमण भयावह रूपमा फैलिइरहेको छ । समुदायमा संक्रमण फैलिइसकेको अहिलेको स्थितिमा बिरामीले अस्पतालमा झट्ट भर्ना पाउन समेत मुस्किल हुन थालेको छ । यो बेला अधिकांश संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा छन् । त्यसरी होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितका लागि जनस्वास्थ्यविद् डा. रविन्द्र पाण्डेले केही महत्वपूर्ण सल्लाह दिएका छन् ।